जाजरकोटको सरकारी डाक्टर माथी सि डि ओ र डि एस पि को दादागिरी | Everest Online News
Reporter: Everest Online News जाजरकोट, सरकार, स्वस्थ्य
जाजरकोट फागुन 28
जाजरकोटको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत डा. संजय यादव ओ पि डी मा बिरामीहरुको जाँच गरिरहेको बेला डि एस पि ले फोने गर्यो र दुईओटा लासको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भन्यो । तर डा.यादवले बिरामीको चाप धेरै भएकोले तत्कालै आउन नसक्ने बताए र उनले सेवा गर्दा गर्दै ढिलो भयो । उनी कार्यरत स्थलबाट पोस्टमार्टम गर्नजाने ठाउँ हिडेर जानुपर्ने र ५ घन्टा लाग्ने भएकोले भोलि मात्रै आउँछु भन्दा पुन: सि डि ओ ले फोन गरि मलाई नचिनेको हो । मेरो कुरा टेरिनस भने ३ दिन थुनेर राख्छु भनेर थर्काएपछी उनी डराएर जिउँदो बिरामी जाँच्न छोडी पोस्टमार्टम गर्न हिंडे ।
डा . यादव भन्छन, यस्तो दुर्गममा आएर सेवा गर्दानी धम्की र डरमा काम गर्नुपर्दा कसरी गर्न सकिन्छ । मैले बिरामीको सेवा गर्दा ढिलो भयो र पोस्टमार्टमको कारनले बिरामी मर्यो अथवा केही भयो भने के डि एस पि र सि डि ओ जवाफ देही हुन्छन । उनले भन्छन म सेवा गर्न आएको हुँ । पहिला बिरामी बचाउनु पर्छ र पछी पोस्टमार्टम ।
उनले सरकारसँग सहयोग गरिदिनका लागि अपिल गरेका छन ।